Warqada Muddada Koolejka: Kireyso khadka tooska ah Qoraagaaga Qormo ee Soomaaliya
Warqad erey tacliimeed Iibso warqad xilliyeed Warqadda ereyga kulleejada Warqad erey bixin ah Bixi warqad xilliyeed Caawinta warqadda muddada Warqadaha muddada iibka ah Ku qor warqaddeyda ereyga Qor warqad-shaqeyga
Xul Wadan Dalbo Hadda
Warqadda Muddada Koolejka ee Soomaaliya si loogu guuleysto natiijooyinka laba jeer ka dhakhso badan!
Qorayaal aqoonyahano aqoon leh iyo 24/7/365 taageero, ayaa hadda laga heli karaa Soomaaliya! Waxaan bixinaa adeegyo Warqad Waqti Kooleej ah iyo daryeel ku saabsan waqtigaaga iyo asturnaanta
Dalbo Hadda Qiimaha
Warqad Tayo Sare leh
5 Ways oo lagu iibsado Waraaqaha Muddada Tartan Aqooneed Online
Waraaqaha ereyada kulleejadu waxay u baahan yihiin qorsheyn badan, cilmi baaris iyo xirfado soo bandhigid ah. Qoraalada kulleejku aad ayey muhiim ugu yihiin khibrada ardayda yar yar waayo aragnimadooda kulleejada maaddaama looga faa'iideysto dejinta astaan ​​aqooneed arday gaar ah. Waxqabadka wanaagsan ee qoraalada kuleejka ayaa sidoo kale aasaas adag u ah ardayda mustaqbalkiisa xirfadeed mustaqbalka. Sidaa darteed, ardaydu waa inay hal dhibic ka dhigaan inay iibsadaan erey adeegsi xilliyeed kaas oo awood u siin doona iyaga inay abuuraan maqaallo kulleejo oo soo jiidasho leh ayna helaan buundada ugu fiican. Tiro ka mid ah adeegyadan oo kale ayaa la heli karaa oo hoosta ayaa ah talooyin dhawr ah oo aad raaci karto si aad u iibsato adeegga ugu fiican ee qormada:
- Lagu hubiyo sax ahaanta adeegga adoo iska hubinaya inay shirkad la oggol yahay iyo in kale. Adeegyo badan ayaa lagu yaqaan inay bixiyaan agab qoraal oo tacliimeed oo liita. Tusaale ahaan, haddii shaqsigu dalbado qaybo waraaqo xilli dugsiyeed ah, waxaa laga yaabaa inuu ku dhammaado helitaanka alaab qoran oo liidata. Waxaa muhiim ah in laga dalbo oo keliya shirkadaha ama shakhsiyaadka lagu yaqaan inay soo saaraan qalab qoraal oo tayo sare leh.
- Hubso in adeeggu isticmaalo galas (turjubaano canab). Galasku waxay awood u leeyihiin inay si sax ah ugu turjumaan ereyada qalaad afkooda hooyo. Saxsanaanta tarjumaada ee uu bixiyay ereyga turjubaanka warqada ayaa ah waxa ardayda badankood ay raadiyaan markay ka iibsadaan waraaqo xilli dugsiyeedka adeeg kasta. Galasku waa inuu awood u yeesho inuu ku turjunto ereyada shisheeye luqadda aad doorbideyso. Waxaad sidoo kale xaqiijin kartaa in adeegu uu leeyahay qalab dib loogu akhriyo.
- Hubso in qoraagu adeegsanayo naxwaha iyo higgaadinta saxda ah. Markaad diyaarinaysid waraaqahaaga muddada jaamacadeed, waxaa aad muhiim u ah inaad leedahay naxwaha iyo higgaadinta saxda ah. Ha ku kalsoonaan oo keliya tarjumaadda uu bixiyay qoraha warqadda. Haddii ay jiraan khaladaad naxwaha iyo higgaadda ah ee qoraalkaaga tacliimeed, waxa ku jira oo dhan ayaa ku guuldareysan doona inay ka soo baxaan waxyaabaha laga filayo macallimiintaada iyo ardayda aad isku fasalka tihiin.
- Dariiqo kale oo lagu hubiyo in waraaqaha ereyga ee aad ka iibsaneysid adeeg bixiye kasta oo khadka tooska ah ku jiraa uu yahay mid tayo sare leh ayaa ah inaad doorato mid ka helay dib-u-eegis wanaagsan ilaha lagu kalsoon yahay. Shirkadaha badankood ee iibiya qalabka wax lagu qoro ee tacliimeed waxay siin doonaan dib u eegista macaamiisha alaabtooda. Akhrinta dib u eegista laga helay ilo kala duwan ayaa kaa caawin doonta inaad go'aamiso adeegga leh tayada ugu fiican uguna qanacsan macaamiisha. Waxaad sidoo kale ogaan kartaa in macaamiisha ay hayaan talo soo jeedin ku saabsan hagaajinta.
- Raadi shirkad siisa adeeg shakhsi ah. Waxaad badanaa ogaan doontaa in shirkadaha ku takhasusay bixinta waraaqaha muddada ay u muuqdaan inay bixiyaan adeegyo shaqsiyadeed oo badan. Adeeggan shaqsi ahaaneed ee noocan ah waxaa ka mid noqon kara u habeynta waxyaabaha ku jira waraaqahaaga muddada kuleejka ah iyadoo lagu saleynayo tilmaamahaaga. Adeeg qoraal wanaagsan ayaa had iyo jeer ka faa'iideysan doona tiknoolajiyada ugu dambeysa uguna casrisan si kor loogu qaado tayada waraaqahaaga muddada.
- Raadi shirkad bixisa qiimeyaal tartan ah. Xaaladda dhaqaale ee maanta, shirkadaha badankood ma awoodaan inay ku xad gudbaan xagga sicirka. Inta badan ardayda kuleejka waxay raadiyaan qiimo jaban si aysan ugu bixin lacag aad u badan iibsashada adeegyada qorista waraaqaha tacliimeed. Shirkad cilmi baaris oo wanaagsan ayaa hubin doonta inaad hesho qiimaha ugu jaban ee la heli karo si loo hubiyo inaad ku raaxaysato qiimaha lacagtaada.
- Waxa kale oo muhiim ah inaad hesho shirkad kaa caawisa habka tafatirka. Qoraa wanaagsan ayaa kaa caawin doona sameynta madaxa cutubka ku habboon ama tusmada waxyaabaha ku jira. Qoraagu wuxuu kaloo wax ka beddeli doonaa waraaqahaaga xilliyeed iyadoo loo eegayo qaabka aad doorbideyso. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, qoraagu waa inuu awood u leeyahay inuu ka jawaabo. Raadi qof diyaar u ah inuu ku siiyo talo marka aad ku dhegto. Tani waa sababta oo ah qoraagu wuxuu awood u leeyahay inuu kaa caawiyo inaad ku guuleysato inaad abuurto shaqo heer sare ah oo ka yaabin doonta ardaydaada isku fasalka ah iyo kuwa kula midka ah
© Copyright 2021 termpaperfastsomalia.online - All Rights Reserved